» प्रियंकाले आफ्नो विवाहमा आँचललाई किन बोलाइनन् ?
प्रियंकाले आफ्नो विवाहमा आँचललाई किन बोलाइनन् ?
२१ फाल्गुन २०७६, बुधबार २२:५८
तर, नायिका आँचल शर्मालाई भने डाकिएको थिएन । प्रियंकाले आँचललाई नबोलाइएकामा अहिले चलचित्र क्षेत्रमा गफको विषय बनिरहेको छ । साथै प्रियंकाले पठाएको निमन्त्रण कार्ड आँचलकहाँ नपुगेको पनि भनिएको छ । तर, यसबारे दुवै केही बताएका छैनन् । स्रोतः क्यानाडा नेपाल